Maxay Kawada Hadleen Muuse Biixi iyo Wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta?
HARGEYSA- Kadib markii wareysi uu dhiibey Wasiiru dowlaha arimaha dibada Dowlada Imaradaka kaas oo sababey in mucaaradka Somaliland ka dalbadaan Madaxweyne Muuse Biixi inuu is-casilo ayaa wafti ka socda wadanka Isu-taga Imaraadka waxaa uu booqasho ku tagey magalaada Hargeysa, waxaana warsaxafadeed kaasoo saarey Madaxtooyada mamaulkaas.
Warsaxafadedka laguma sheegin in waftigaan ka socdey dowlada Imaraadka heerkooda siyaasadeed. Waxaana uu u qoraa sidatan.
Farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyay caasimadda Jabuuti 18.08.2019. 19:23
Jubaland oo dalbatay raalin-gelin xili ay diiday baaqa Beesha Caalamka 18.08.2019. 16:44
Farmaajo oo socdaal laba maalmood ah ugu dhoofay Jabuuti 18.08.2019. 16:23
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga oo shaqada laga joojiyey 18.08.2019. 16:16
Maxkamadda Sarre ee Ciidamada oo ayiday xukuno lagu riday askar 18.08.2019. 15:47
Waddani oo ka baxay heshiiskii xisbiyadda Somaliland ee doorashada 18.08.2019. 14:17